My freedom: ဖျား
မနေ့ကပဲ ကန်ဒီ့ Presentation လေး ပြီးသွားတယ်။ တစ်ခုပြီးရုံလေးရှိသေးတယ် နောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကို ဧပြီရွေးမလား.. မေရွေးမလားတဲ့။ ဧပြီလကတော့ သိတဲ့အတိုင်းမအားဘူးလေ။ သင်္ကြန်ဆိုတော့ အကတိုက်တာတွေ ဘာတွေနဲ့ရှုပ်နေတာ၊ ညီမလေးဘွဲ့ယူဖို့ အမေတို့လည်း လာမယ်။ မအားတော့ မေလပဲယူမယ်ပြောထားတယ်။ ဒီတခေါက် Topic က အရိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်း.. ကန်ဒီဘယ်ရောဂါအကြောင်းလုပ်ရမလဲတော့ မသိသေးဘူး။ အရိုးနဲ့ပက်သက်တာဆို ဂေါက်ရောဂါရှိမယ်၊ အရိုးပွရောဂါရှိမယ် စသဖြင့်...
ဒီတခေါက် "Ischemic Stroke" ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်တဲ့ရောဂါအကြောင်း လုပ်လိုက်တာ ကိုယ်သိပ်မသိတဲ့အရာတွေ အများကြီးပိုသိသွားတယ်။ အကျိုးရှိတယ်။ ဖတ်ရတဲ့ Paper တွေလည်း မနည်းဘူးလေ။ ကိုယ်နဲ့စိမ်းတဲ့ Topic ဆိုတော့.. Challenge တစ်ခုပြီးသွားလို့ ကျေနပ်တယ်။ ကန်ဒီ့ Next Challenge က ဘာလဲဆိုတော့ ဒီမတ်လနဲ့ ဧပြီလကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတာပဲ ဟဟဟ.. သင်္ကြန်အတွက် အကတိုက်ဖို့တွေရှိတယ်၊ ဒီအပတ် Stock take ရှိတော့ စနေတနေကုန်အလုပ်ဆင်းရမယ်၊ လာမယ့်အပတ် ရန်ကုန်ကို (၄)ရက်ပြန်ရမယ်၊ Vegan Baking Class ရှိတယ်၊ ကလေးတွေ စာသင်ရမယ်၊ အမေတို့လာမယ်.. သူ့သူငယ်ချင်းပါ ခေါ်လာမယ်ဆိုတော့ လိုက်ပို့ပေးရမယ်။ ဒီလိုပဲ လုံးလည်ချာလည်လိုက်ပြီး ပြီးသွားမှာပါပဲ ဟဟဟ xD သြော်.. ဒီနေ့ချက်ဖြစ်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလေး ကြွားရဦးမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ထူးထူးဆန်းဆန်း ကန်ဒီနေမကောင်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ကန်ဒီဆိုတာ တော်တော်နေမကောင်းဖြစ်ခဲတဲ့သူ။ ကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်ဖူးတဲ့အခေါက်ရေကို လက်ချိုးရေလို့ရတယ်။ အလုပ်လုပ်တာ (၄)နှစ်ရှိပြီ.. တစ်ခါမှ MC မယူဘူး။ ဒီတခေါက်ဖျားတယ်ဆိုတာလည်း အပြင်းဖျားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေ့ငွေ့လေးဖျားတာ.. တက်လိုက်ကျလိုက် (၃)ခါလောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ အလုပ်လည်း သွားတယ်လေ။ ကိုယ်ကအလုပ်မသွားရရင် မနေနိုင်တဲ့လူ။ တစ်ခုပဲ တော်တော်ဆိုးတာက အဖျားမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ အသံဝင်သွားတာပဲ။ စနေနေ့က အသံလုံးဝမထွက်တော့ ကန်ဒီ့မန်နေဂျာက အပြင်မှာဆေးမပေးနဲ့... အထဲမှာပဲနေဆိုပြီး ခွင့်ပေးတယ်။ ကံကောင်းလို့ ကန်ဒီ့ Presentation နေ့ကျ အသံပြန်ထွက်လာတယ်။ ဖြစ်ပုံက အခုအသံပြန်ထွက်လာပေမယ့် ချောင်းဆိုးနေတယ်။
နေမကောင်းတဲ့နေ့တွေ ဟင်းမချက်နိုင်တော့ အပြင်မှာပဲ စားရတယ်လေ။ ကိုယ်ချက်တာလောက် ခံတွင်းမတွေ့ဘူး။ နည်းနည်းနေပြန်ကောင်းလာတာနဲ့ ဈေးသွား အရွက်တွေအများကြီးဝယ်တယ်။ ဟင်းသေချာချက်စားတယ်။ ရွှေဖရုံသီးကို အုန်းနို့လေးနဲ့ ပဲသီးနဲ့ Soup လိုလေးချက်တယ်။ တို့ဖူးမွှေကြော်တယ်။ အရွက်ကြော်တယ်။ အသီးအရွက်တွေ များများစားချင်စိတ်ပေါက်လာရင် Salad လုပ်စားတယ်။
သင်္ကြန်နားနီးလို့ သင်္ကြန်ပိုးထနေတဲ့ရောဂါလေး နည်းနည်းပျောက်အောင် မနှစ်က ကိုယ်တွေအဖွဲ့ ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်မှာ သွားကပြီး အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုလေး အမှတ်တရ ရှယ်လိုက်ဦးမယ်။ ကန်ဒီတို့ယိမ်းက တိုပါးရိုးပင်တိုင်ယိမ်း.. မနှစ်က ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်မှာ လာကဖို့ဖိတ်တော့ တချို့သူတွေက မလာနိုင်တာနဲ့ ဘာနဲ့ (၈)ယောက်လောက်ကတဲ့အဖွဲ့က (၅)ယောက်လောက်နဲ့ သွားကရတော့ ကိုယ်တွေဖော်ထားတဲ့ အကွက်လှလှလေးတွေ ပျောက်ပြီး ဟာသတွေဖြစ်ကုန်တာလေ။ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သိမှာမဟုတ်လောက်ပေမယ့် ကိုယ်တွေက သိနေတော့ ရီချင်နေတော့တာ ဟဟဟ xD
Posted by Candy at 11:36 PM
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးကိုရေးရေး ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဖတ်ချင်စဖွယ်။ အမြဲဝင်ဖတ်ဖြစ်တယ် ညီမလေးရေ။
ငရုတ်သီးက မစပ်လို့ မမမိုးငွေ့ရေ.. ဟီးဟီး
It'll be good if you could writeapost on the vegetarian monhinga that you cooked. It looks good !
ဟုတ်.. အဲ့ဒီပုံထဲကဟာက မုန့်ဟင်းခါးထုပ်ကိုပြင်ပြီး အလွယ်ချက်တာမို့ မပြောပြဖြစ်သေးတာပါ